Ezokwakha/izimayini - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Iyini i-Smart City
Izicelo zangempela ze-Smart City
Amakhamera e-Rainpoo oblique asiza ngamaphrojekthi e-Smart City
Yiziphi amakhamera e-oblique asetshenziselwa ukwakha / izimayini
Ngesofthiwe yemephu ye-3D, ingakwazi ukukala ngokuqondile ibanga, ubude, indawo, ivolumu kanye nenye idatha kumodeli ye-3D. Le ndlela esheshayo neshibhile yokulinganisa ivolumu iwusizo kakhulu ukubala isitoko ezimayini nasezinkwalini ngezinhloso zokusungula noma zokuqapha.
Ukuqapha nokusebenza ukuhlela
Ngemodeli ye-3D enembile ekhiqizwe kumakhamera atshekile, abaphathi bezokwakha/bezimayini manje sebengakwazi ukuklama nokuphatha imisebenzi yesayithi ngenkathi besebenzisana kuwo wonke amaqembu. Lokhu kungenxa yokuthi bangakwazi ukuhlola ngokunembe kakhudlwana umthamo wezinto okufanele zikhishwe noma zihanjiswe ngokuvumelana nezinhlelo noma izindinganiso zomthetho.
Ukuhlola ngaphambi nangemuva kokubhoboza noma ukuqhunyiswa
Ngokusebenzisa amakhamera e-oblique ezimayini, ukhiqiza ukwakhiwa kabusha kwe-3D okungabizi futhi okufinyelelekayo kanye namamodeli angaphezulu ukuze kuqhunyiswe noma kubhojwe.Lawa mamodeli asiza ukuhlaziya ngokunembile indawo okufanele ibhojwe futhi abale umthamo ozokhishwa ngemva kokuqhuma. Le datha ikuvumela ukuthi uphathe kangcono izinsiza ezifana nenani lamaloli adingekayo. Ukuqhathanisa nezinhlolovo ezithathwe ngaphambi nangemuva kokuqhunyiswa kuzovumela amavolumu ukuthi abalwe ngokunembe kakhudlwana. Lokhu kuthuthukisa ukuhlela ukuqhuma kwesikhathi esizayo, ukunciphisa izindleko zeziqhumane, isikhathi esizeni kanye nokumba.
Kungani sebenzisa ama-drones namakhamera e-oblique ekwakheni/kwezimayini
Ngenxa yesimo esimatasa sezindawo zokwakha nezezimayini, ukuphepha kwabasebenzi kuyinto ehamba phambili. Ngamamodeli anokulungiswa okuphezulu asuka kukhamera etshekile, ungahlola izindawo okunzima ukuzifinyelela noma ezinethrafikhi ephezulu zesayithi, ngaphandle kokuzifaka engozini noma iziphi izisebenzi zethu.
Amamodeli e-3D akhiwe amakhamera atshekile afinyelela ukunemba kwebanga lenhlolovo ngesikhathi esincane, abantu abancane, nezisetshenziswa ezincane.
Ukuphathwa nokusatshalaliswa kwephrojekthi kungaqedwa ngemodeli ye-3D ngaphandle kwemisebenzi eya esizeni ukuze kuqaliswe le misebenzi, okuzonciphisa kakhulu izindleko.
Inani elikhulu lomsebenzi lidluliselwe kukhompuyutha, okwasindisa kakhulu isikhathi sonke sawo wonke umsebenzi